lonetone: အမေရိကားမှာ တစ်လတာ
ဂျပန်မှာ အတော်နေသားကျပြီး၊ ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှု နဲ့နေထိုင်မှုပုံစံ ကို နှစ်သက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ အလုပ်ကိစ္စနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို သွားရောက် နေထိုင်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လကုန်မှာ အိုဘားမားတို့ ဌာနေ အမေရိကားကို စရောက်ခဲ့ပါတယ်။
(နယူးယောက်မြို့ Times Square ဝန်းကျင်)
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေ အပါအ၀င် ရောက်ဖို့ ရာ ခက်ခဲတဲ့နိုင်ငံအချို့ ကို ကံအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ရောက်ဖူးပေမယ့်၊ အဓိက အင်္ဂလိပ်စကားပြော နိုင်ငံ (၅) နိုင်ငံ ရယ်လို့ငယ်ငယ်က ဖတ်မှတ်ဖူးတဲ့ အင်္ဂလန် (UK) ၊ အမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ သြစတြေးလျ နဲ့နယူးဇီလန် စတဲ့နိုင်ငံတွေကို တစ်နိုင်ငံမှ မရောက်ဖူးသေးလို့ 
ဒီတစ်ခါတော့ ငါတစ်သက်လုံး သင်စားလာတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို ကောင်းကောင်းကြီး အသုံးချရတော့မယ်...ဆိုပြီးလည်း ဝမ်းသာရပါတယ်။
အမေရိကား ရောက်ခါစမှာ တွေ့ မြင်လေ့လာမိတာတွေကို (first impression အနေနဲ့ ) ရောက်စ တစ်ပတ်အတွင်းမှာ ရေးချင်စိတ် ပြင်းပြခဲ့ပါတယ်။ မရေးဖြစ်တာ ကြာသွားပြီဖြစ်တဲ့ ဒီ ဘလော့ဂ်ကို အသက်ဆက်ချင်တာလည်း ပါပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း တစ်လကျော် နှစ်လနားသာ ကပ်လာပါတယ် စာရေးဖို့ က ဝေးလို့ နေတာမို့ ၊ ကနဦး စိတ်ကူးထားတဲ့ အမေရိကားမှာ တစ်ပတ်ကြာ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကနေ တစ်လတာ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်သာ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
အမေရိကန်ရောက်စမှာ ဒီနိုင်ငံကို အစစ အရာရာ ဂျပန် ပေတံနဲ့ တိုင်းတာမိတယ်။
ကမ္ဘာကျော် JFK လေဆိပ်သွား လမ်းမကြီးမှာ ချိုင့်ခွက်အချို့ ၊ လမ်းဘေးဝဲယာက မသေမသပ် ကွန်ကရစ်တုံးများကို စတင် သတိပြုမိပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောသလို နယူးယောက်မြို့ ကို ဆနွင်းမကင်းလို block အလိုက် တည်ဆောက်ထားတာမို့လမ်း block တွေ ကြားတိုင်းမှာ မီးပွိုင့်တွေရှိတာ၊ ရှိတဲ့ မီးပွိုင့်တိုင်းကို နီတာ၊ ဖြူတာ (လူကူးလို့ ရရင် လူပုံစံ မီးဖြူပြတာမို့ ) ဂရုမစိုက်ဘဲ ကားရှင်းရင် ရှင်းသလို ဖြတ်၊ ဖြတ်ကူးကြတာမို့စည်းကမ်းလိုက်နာရင် ဒီဒေသခံ မဟုတ်ကြောင်း လူသိပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ ဝတ်ပုံစားပုံပါ။ ဂျပန်မှာ ဂျပန်လူမျိုး အများစုကို အလုပ်ချိန် အတွင်းနဲ့ သွားလာလှုပ်ရှား commute လုပ်ရာမှာ Suit နဲ့အမြဲလိုလို တွေ့ ရပေမယ့်၊ ဒီမှာတော့ အမေရိကန်များရဲ့ ပေါ့ပါးသွက်လက်တဲ့ ထသွားထလာ causal ပုံစံ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကိုသာ တွေ့ ရတာမို့ဒင်းတို့ တွေ အလုပ်များ လုပ်ပါလေစလို့ထင်မိပါရဲ့ ။
ရောက်စ (၃) ရက်လောက်မှာ ကုလသမဂ္ဂ ဘက်ရောက်လို့ကားပေါ်ကနေ အမှတ်မထင် အပြင်ကို ငေးစဉ်မှာ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းနဲ့သူ့ အဖွဲ့ သား သုံး၊ လေးယောက် လောက် လမ်းလျှောက်ပြီး ထမင်းထွက်စား ကြတာ မြင်လိုက်မိပါတယ်။ သြော်ဒီမှာတော့ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ကြီးလဲ တခမ်းတနား မဟုတ်ဘဲ သူလိုငါလိုပါလားလို့အတွေးရောက်မိပါတယ်။
(နယူးယောက်မြို့ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အဆောက်အအုံ)
အခုကာလက အမေရိကန်ရဲ့ summer ဖြစ်တာကြောင့် ဒီကြားထဲ နယူးယောက်မြို့ နဲ့ မလှမ်းမကမ်းက နာမည်ကျော် Atlantic Ocean ပေါ်က Jones Beach ကို ရောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီက ကမ်းခြေ အတော်များများမှာ အရက်သေစာ သောက်စားခွင့် မရှိတာ၊ ကက်ဆက်၊ သီချင်းကို ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ဖွင့်မရတာတွေကို သိလာရတော့၊ အမေရိကန်ကို ရောက်ရင် လုပ်ချင်တာအကုန် လုပ်လို့ ရမယ်ထင်တဲ့ လူငယ်အချို့ ကို သွားသတိရမိပါတယ်။ ချောင်းသာ ၊ ငွေဆောင် မှာ သောက်ချင်တိုင်းသောက်၊ သီချင်း ဖွင့်ချင်သလောက် ကျယ်ကျယ်ဖွင့်လို့ရတာတောင် အခွင့်အရေး မရှိဘူးလို့ထင်ကြလို့ ပါ။
အဲ...အမှိုက် ကြီးကြီးမားမားပစ်ဖို့ ကြုံလာရင်တော့ ဂျပန်မှာလို ပစ္စည်းအပေါ် မူတည်ပြီး ပိုက်ဆံပေးစရာ မလိုတဲ့အတွက် စိတ်ချမ်းသာရပါတယ်။ အမှိုက် ခွဲခြားပစ်ဖို့ လိုအပ်ပေမယ့် ဂျပန်မှာလောက် precise မဖြစ်၊ အသေးမစိတ် ကြပါဘူး။
အမေရိကားမှာ စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်ရတာကတော့ Tax & Tips လို့ ခေါ်ရမယ့် T နှစ်လုံးပါပဲ။
ဘယ်သွားသွား၊ ဘာဝယ်ဝယ် (၁ဝ) ရာခိုင်နှုန်း နီးပါး ပေးရတဲ့ tax နဲ့စားသောက်ဆိုင်များမှာ အဓိက မဖြစ်မနေ ပေးရတဲ့ (၁၅) ကနေ (၂၀) ရာခိုင်နှုန်းသော tips ပါပဲ။ ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ဂျပန်မှာ ကျောင်းသားအဖြစ်နဲ့ဒီ T နှစ်လုံး သက်သာတော့ နေပျော်ခဲ့ပါတယ်။ (အချို့ သော ဆင်းရဲတဲ့ တတိယနိုင်ငံများက ဝန်ထမ်းများကို ဆိုင်ပိုင်ရှင်အချို့ က လုပ်ခလစာ မပေးဘဲ tips ပေါ်မှာသာ ရပ်တည်ခိုင်းပြီး၊ အမြတ်ထုတ်ကြကြောင်း လည်း ကြားသိရပါတယ်။ အမေရိကားက ရှိတော့ ရှိတယ် ရှားတယ်ဆိုသော အဖြစ်များလို့ဆိုရမှာပါပဲ။)
လူငယ်သဘာဝ အမေရိကန် night-life ကိုလည်း အမေရိကန်သူငယ်ချင်းများနဲ့ခံစားကြည့်ခဲ့ပါသေးတယ်။ Gentlemen's Club များမှာတော့ Gold Label တစ်လုံး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅၀၀)၊ Black Label တစ်လုံး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃၀၀) ကျော် နဲ့အပေါဆုံး ဘီယာတောင် (၁၀) ကျော် နဲ့cover charges (ဝင်ကြေးများ) ရှိတာမို့ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် မသုံးရင် bankruptcy ဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်း ခင်မင်စွာ အသိပေးလိုက်ပါတယ်။
တစ်လအတွင်း တွေ့ မြင်မိတာတွေက များတာမို့ အကုန်ပြောရင် စာလေးသွားမှာ စိုးရိမ်မိပါတယ်။ ပြည်ပ မထွက်ဖူးသော အမေရိကန် သူငယ်ချင်းများက သူတို့ ရဲ့ subway စနစ်တွေ ကောင်းမွန် သန့် ရှင်းကြောင်း ပြောတဲ့အခါမှာတော့ ဂျပန်ပြန် ကျွန်တော်မျိုး ပြုံး၍သာ နေခဲ့ပါတယ်...ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အောက်ကဓါတ်ပုံကို ကြည့်ရင်သိနိုင်လို့ ပါပဲ။
(ကမ္ဘာကျော် Grand Central ဘူတာရုံအတွင်း)
အခုတော့ ဂျပန်ပြည် မြေအောက်ရထား (chikatetsu) အထဲက ရောက်ပါတော့မယ် (Mamonaku...) ဆိုတဲ့ စကားသံအစား နယူးယောက်မြို့ မြေအောက်ရထားထဲက Stand Clear of the Closing Doors, Please! ဆိုတဲ့ ရှတတ အမေရိကန်သံကို တဖြည်းဖြည်း ယဉ်ပါးလို့ နေမိပါပြီ...
Posted by lonetone at 12:55 AM
မွန်မွန်ယိုကို August 22, 2012 at 6:07 AM
ကို Lone Tone ရေ ဟုိုးအရင်ကတည်းက လာလည်နေကျ ဘလော.ပါ။
ခုလို ပိုစ်.တွေပြန်လည်အသက်ဝင်လာတဲ.အတွက် ဝမ်းသာပါတယ်။ ဂျပန် အမေရီကန် နှစ်နုိုင်ငံအတွေ.အကြုံအရင်းခံပီး ယှဉ်ထိုးပြတော. ဗဟုသူတရတာပေါ.ရှင်။
ဆက်ပီးလဲ အတွေ.အကြုံတွေဝေမျှပါဦးနော်။ အားပေးနေပါ.မယ်။
အချိန်ရရင်လဲ မွန်မွန်.ဘလော.လေးကိုလဲ ဝင်လည်ဖုို. ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
စာတွေပြန်ရေးပီဆုိုတော. ဘလော.မှာချိတ်ဖုို. လင်.လဲယူသွားမယ်နော်။
ကျော်နှင်းဆီလွင် February 19, 2013 at 9:04 AM
Dapatkan yang terbaik dari SEO profesional Anda